crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Fariimaha Jaceylka | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Dhanbaallada November 10, 2015	0 1,054 Views
Xeebta Lammaanaha, Muqdisho – Waxaa tahay gogol-dhigga iyo gunaanadka maskaxdayda goor iyo ayaan kasta. Waxaan dareemaa bukto marka aan ku fikiro inaan kaa sooco noloshayda. Waxaad ku ifisaa naftayda dhawaqyada codkaada. Waxaad igu beertaa reynreyn iyo farxad. Wax kasta ayaad ii tahay. Aad ayaan Eebe ugu mahad-naqay markuu adiga ii kaa soo diray si aad ii daryeesho.
Waxaa tahay nolosheyda. Waxaana kuu jeclahay si ka badan naftayda. Jaceylkaada laguma iibsan karo lacag. Runtii kali-socodnimadu ma adka. Laakiin markan fogaan wada socno, kadibna aan kaligay iska soo laabto ayaa igu ah dhib. Kalinimo ha iiga tegin.
Jaceylkaygu si dhab ah ayuu kuu jecel yahay. Waad ku mahadsan tahay dhameystirka nolosheyda. Waxaad xodxodatay laabtayda; adiga oo hantiyey dadnimadayda. Waxaadna heshay ruuxdeyda. Adiga ayaana ku ahay waligay. Wax kasta oo adiga kugu saabsan way iga farxiyaan. Maalin kasta dareenkaygu wuxuu helaa lixaadsi iyo lixaadsi.
Previous: Australia: Markuu geel-jiraheennu macalin noqdo
Next: Ahmad Alshugairi; Nin Ummad u dhigma
Haweeney maqaayad ku dacwanaysa sababta dhimasho ee Eygeeda.